ကားလ် လင်းနီးယပ် သည် ဆွီဒင်လူမျိုး ဇီဝဗေဒပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သည
ⓘ ကားလ် လင်းနီးယပ် သည် ဆွီဒင်လူမျိုး ဇီဝဗေဒပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် ရုက္ခဗေဒ နှင့် သတ္တဗေဒ နှစ်မျိုးလုံးကို အထူးတလည် လေ့လာလိုက်စားခဲ့၍ ဒွိနာမစနစ် ပါဝင်သည့် ခေတ ..
အော်ကာ သည် သမုဒ္ဒရာလင်းပိုင်မိသားစုရှိ အကြီးမားဆုံး အကောင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သွားရှိသော ဝေလငါးတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ သူ၏ သိပ္ပံအမည်မှာ အော်စိုင်းနပ်စ် အော်ကာ ဖြစ်သည်။ အော်ကာဟူသော အခေါ်အဝေါ်ကို ယခုအခါ ပိုသုံးလာကြသော်လည်း၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသည့် သိပ္ပံပညာရှင်များကမူ ဝေလသတ်ငါး ဟု ခေါ်သော သုံးနေကျအရပ်သုံးအမည် ကို အသုံးများကြသည်။
ⓘ ကားလ် လင်းနီးယပ်
1. ငယ်ဘဝ နှင့် ပညာရေး
သူ့ကို ဆွီဒင်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းရှိ စမြွက်လန်ကျေးလက်ဒေသ၊ ရီးရှားရွာတွင် မွေးဖွားသည်။ သူ၏အထက်တန်းပညာရေးကို အပ်စလာ တက္ကသိုလ်တွင် သင်ကြားခဲ့ပြီး သူ့အသက် ၂၃ အရွယ် ၁၇၃၀ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားပင် ဖြစ်လင့်ကစား ရုက္ခဗေဒ တက္ကသိုလ်ဆရာအဖြစ် စာသင်ကြားပို့ချခဲ့ဖူး၏။ အသက် ၂၈ ကျော်လွန်သော် ၁၇၃၅ မှ ၁၇၃၈ အတွင်း နိုင်ငံရပ်ခြားနယ်သာလန်တွင် ဆေးလက်တွေ့ပါရဂူဘွဲ့အတွက် ပညာဆက်လက်သင်ကြားပြီး သူ၏ ပထမဆုံးစာအုပ်အဖြစ် Systema Naturae အမည်ရှိ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အမျိုးအစားခွဲခြားနည်းစာအုပ်ကို ၁၇၃၅ တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ စတင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
2. ပါမောက္ခချုပ် ဖြစ်ခဲ့ခြင်း
3. နောက်ဆုံး ကျန်းမာရေး
4. သူ၏ အောင်မြင်မှု
သူကွယ်လွန်ချိန်၌ သူ့ကို ဥရောပတွင် ဂုဏ်ပြုထိုက်သော သိပ္ပံပညာရှင်များအနက် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ လင်းနီးယပ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်း ၁၈ ရာစုအတွင်း လင်းနီးယပ်၏အမျိုးအစားခွဲနည်းပညာသည် ဇီဝဗေဒတွင် ကျယ်ပြန့်ခဲ့ရာ ယခုခေတ်အထိ တွင်ကျယ်နေဆဲ ဖြစ်၏။ လင်းနီးယပ်တည်ဆောက်ခဲ့စဉ်က လောကKingdom သုံးခုသာ ရှိခဲ့သည်။ လောကအောက်တွင် မျိုးပေါင်းစုPhylum/Division တို့ကို မတွေ့ရသေးဘဲ မျိုးခွဲclassအဖြစ် ခွဲခြားထားခဲ့၏။ မျိုးစဉ်Order ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းအောက် မျိုးရင်းFamily မပါဝင်သေးချေ။ ခေတ်သစ် အမျိုးအစားခွဲနည်းပညာတွင်မူ အဆိုပါ မျိုးပေါင်းစုနှင့်မျိုးရင်းတို့ ပါဝင်လာခဲ့သည်။
Wikipedia: ကားလ် လင်းနီးယပ်